Shiinaha PCB-Golaha Warshadaha iyo soosaarayaasha | Sichi
(1) Wax soo saar hufan:
PCB waxay ogaan kartaa isku xirka korontada ee ka dhexeeya qeybaha kala duwan ee wareegga, halkii laga sameyn lahaa xargaha kakan, yareeyo culayska shaqada fiilooyinka hab dhaqameedka, iyo in la fududeeyo alxanka, isu imaatinka iyo ka saaridda alaabta elektaroonigga ah.
(2) Kalsoonida iyo yareynta:
Mugga alaabta elektaroonigga ah ayaa la dhimay, qiimaha badeecadda ayaa la dhimay, waxaana la hagaajiyay isku halaynta iyo tayada alaabta qalabka elektarooniga ah.
(3) Heerka wax soo saarka:
Waxay leedahay is -weydaarsi wanaagsan oo cutubyada alaabta ah. Waxay qaadan kartaa naqshad la jaangooyay, taas oo ku habboon farsamaynta alxanka iyo otomaatiga wax -soo -saarka, waxayna wanaajisaa hufnaanta wax -soo -saarka.
(4) Dayactir wanaagsan iyo is -weydaarsi:
Qaybaha qalabku waxay leeyihiin sifooyin farsamo iyo koronto oo wanaagsan, si qalabka elektiroonigga ahi uu u garto wax soo saarka xariiqda shirka, iyo dhammaan guddiga wareegga daabacan ka dib kulanka iyo khaladka waxaa loo adeegsan karaa qayb firaaqo ah, oo ku habboon is -weydaarsiga iyo dayactirka alaabta oo dhan.
Sababtoo ah afarta faa'iidadood ee ka sarreeya PCB, PCB ayaa si weyn loogu adeegsaday soo -saarka alaabada elektiroonigga ah. PCB la'aantiis, ma jiri doonto horumar degdeg ah ee warshadaha macluumaadka elektiroonigga ah ee casriga ah. Teknolojiyadda Jingbang ayaa sidoo kale sii wadi doonta hagaajinta hannaanka wax -soo -saarka si macaamiisha loo siiyo adeeg wanaagsan.
Xiga: PCB LAYOUT
Adeegyada Golaha PCB
Been abuurka PCB Iyo Golaha